IFTIINKACUSUB.COM: Sirtu Waa Rajadda Iyo Mustaqbalka .W/Q: Garyaqaan Axmed Nuur Guruje.
Sirtu Waa Rajadda Iyo Mustaqbalka .W/Q: Garyaqaan Axmed Nuur Guruje.
Mar kale isaggoo tashiilka dhaqaalaha ka hadlaya wuxuu yidhi , waxaynu haynaa waa shini , shinidana lama qadhiidho , marka saracu inoo soo baxo , ayaa qadhiidhan doontaane , shinidda ha taabanina .( M I Cigaal )
Markii Madaxda iyo Minjuhu isku meel deggi waayeen , isku Dhakhtar noqon waayeen , isku dabaqad noqon waayeen , ee isku dugsiyo noqon waayeen , ayay is fahmi waayeen ilayn isku aduunba kuma wadda noolee .
Aduunku wuxuu ku nool yahay aragti iyo himilo , waxaana dhisa aragtidda iyo himiladda inta hogaamisa , sidaasina waa sunne alle inoo jideeyay .
Ilaahay baa yidhi , markaa gudataan , waajibkayga cibaado ee aan idinku leeyahay , waan idin janaynayaa , siddaa darteed , Umaddan Somaliland waxay u baahan tahay in loo sameeyo , Itijaah iyo rajo ay ku noolaadaan .
Haa waan ogahay in la shaqaynayo , laakiin waxaa loo baahan yahay wax ka badan shaqo maalmeed , dadku uma noolaaddo maalin dagaal , laakiin Mustaqbal iyo yididiilo ayay u baahan yihiin .
Binu'aadamku noloshiisa oo dhan , wuxuu ka warwaraa Mustaqbalkiisa , Mustaqbalkuna waa muuqaalka qofku ku qiimeeyo noloshiisa , inta qofku mustaqbalkiisa ka webinayo , waano iyo wax sheeg keliya , waxba uma taraan , hadaan la tusin , sawir ka duwan , muuqaalka ka walaaciyey .
Somaliland waxaad moodaa , in Dadka iyo Madaxdeedu is ilowday , kala warhaynta iyo is xog-ogaanshuhuna ku yaraaday , hadaan Siyasiyiintu keenin xiise iyo xamaasad wadaniyadeed , oo dadka ku beerta , qiiro iyo qanaacad nololeed , aafada tahriibka iyo aafooyin badan oo kale oo ay sabbeen , xanuunadda ka dhasha , degenaansha la'aanta nololeed way sii soconayaan .
Waan hubaa inaan Cuduraddda Macaanka iyo dhiig-karku . ka khasaare yarayn , tahriibka , sababta keenaysa weli ma is waydiisay ?
Saaxiibadayda dhakhaatiirta ah baa inoo faahfaahin doona , laakiin , waxaan kusuu gaabinayaa hadalkayga , Noloshu Rajo , Rajaduna waa nolosha
W/Q.Garyaqaan Axmed-nuur Guruje.